Sidee buu noqon karaa mustaqbalka Suudaan Al-Bashiir kadib - BBC News Somali
Sidee buu noqon karaa mustaqbalka Suudaan Al-Bashiir kadib
Image caption Milatariga Suudaan ayaa la wareegay maamulka
Wasiirka gaashaan dhigga ee Sudan ahna madaxa taliska milatariga ayaa shir jaraa'id oo si weyn loo sugayay goor dhaow ku sheegay in xilka laga qaaday Al-Bashiir isla markaana xabsiga loo taxaabay.
Cawad Ibnu Cawf ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dalka la galinayo 3 bilood oo xaalad deg deg ah isla markaana muddo 2 sano ah ay milatariga xukunka waddanka sii heyn doonaan, ilaa inta doorasho xor ah laga sameynayo.
Sida laga soo xigtey dadka tiro koobka sameenayay, inta u dhexeysa 45 ilaa 60 qof ayaa la dilay, waxaana dilay ciidamada dawladda ee ku sugnaa goobaha ay dibad-baxyada ka dhacayeen, boqollaalna waa la xidhay - kuwaasoo qaarkood la jirdilay.
Image caption Al-Bashiir ayaa Suudaan xukumayay ku dhawaad 30 sano
- Waxuu ka dagaallamay Masar markii uu socday gadaalkii u dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil sannadkii1973-kii.
- Waxa uu awoodda ka qaaday islaamiyiinta xagjirka ah ee suudaan 1989-kii.
- Wuxuu magangelyo siiyay hoggaamiyahii hore ee al-Qaacida Usaama bin Laadin markii ay taariikhda ahayd 1990-yadii
- Waa hogaamihii ugu horeeyay ee la eedeeyay lana hor geeyay maxkamadda ICC sanadka 2009, laakiin beeniyey eedeymaha dambiyada dagaal ee Darfur uu ka gaystay.
- Waxuu heshiis nabad la galay mucaaradka kooforeed 2005-tii
- Wuxuu goob joog u ahaa kormeerkii lagu samyeeyay koofurta suudan 2011-kii, taas oo keentay in Sudan ay lumiso saddex meelood meel hantida saliidda ay leedahay.
- Noloshiisa gaarka ah waxba lagama oga. Wax caruur ah namuusan dhalin.
Ol'olaha difaaca uu madaxwaynaha sameeyay
Image caption Ciidamada qaarkood ayaa lagu eedeeyay inay shacabka rasaas ku fureen
Image caption Mudaharaadyada ayaa sii xoogeystay maalmihii dambe